Garisa oo Bandow lagu soo rogay. Dowlada soomaaliya iyo Maamulka Jubaland oo cambaareeyay weerarka iyo Alshabaab oo ka hadashay weerarka. | BALIBUSLE.COM
« Garisa:Dhimashada oo maraysa 147 ruux,iyo Kenya oo laga dilay dadkii ugu badnaa…
(Faalo)Iraan Iyo Wadamada 5 ah oo ku heshiiyay Niyukliyerka iyo Natanyahu oo ka… »
Garisa oo Bandow lagu soo rogay. Dowlada soomaaliya iyo Maamulka Jubaland oo cambaareeyay weerarka iyo Alshabaab oo ka hadashay weerarka.
Published 3. april 2015 | By Farah
(BB)Bandow ayaa la filayaa inuu maanta oo Jimce ah taariikhduna ay ku beegan tahay 3/4/2015-ka uu si rasmi uga hirgalo Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya,waxaana Bandowgan uu imanayaa xilli Dawada Kenya ay shaacisay inay soo afjartay Weerarkii Shabaab ay ku qaadeen Jaamacadda Gaarisa.
Magaalada Gaarisa ayaa maanta ku Waabariisatay xaalad Murugo ah,xilli Weerarka lagu qaaday Jaamacadda ay ku dhinteen 147-qof,halka 80-kalena ay ku dhaawacmeen,waxaana dadka dhaawaca culus uu soo gaaray loo qaaday magaalada Nairobi.
‘’Waxaan Bandow kuso rognay magaalooyinka Gaarisa,Wajeer,Mandhera iyo Tana Riva laga bilaabo maanta,qof kasta oo dagan degmooyinkan waxaa loo sheegayaa inuusan kaso bixin Gurigiisa laga bilaabo Fiidkii illaa Aroortii’’Sidaa waxaa yiri Sarkaal sare oo ka tirsan Dawlada Kenya.
Xassan Sheekh oo Cambaareeyay Weerarka.
Madaxweynaha Dawlada Federaalka Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud ayaa Cambaareeyay Weerarka Khasaaraha gaystay ee Al-Shabaab ay ka fuliyeen Jaamacadda Gaarisa.
Xassan Sheekh ayaa sheegay inuu Murugada la qaybsanayo qoysaska iyo ehelada dadkii lagu laayay Weerarka Jaamacadda,waxaana uu xusay in Weerarku uu muujinayo sida loogu baahan yahay in Kenya iyo Soomaaliya ay dardargaliyaan dagaalka ka dhan ah Shabaab.
Madaxweyne Xassan ayaa sheegay in Kenya ay tahay dal ay Soomaaliya walaalo yihiin,isla markaana uso Gurmaday Soomaaliya.
Jubaland oo Cambaaraysay Weerarkii shalay
Madxweynaha Dawlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa si kulul u Cambaareeyay Weerarka khasaaraha badan dhaliyay ee Shabaab ay ku qaadeen Jaamacadda Gaarisa ee Goboka Waqooyi Bari Kenya.
Mudane Axmed Madoobe ayaa sheegay in Weerarka Shabaab ay ku qaadeen Gaarisa uu yahay ficil Argagisixiso,kaasi oo lala beegsaday buu yiri dad aan waxba galabsan.
Hadalka ayaa Madaxweynuhu uu ka sheegay xilli uu Saxaafadda kula hadlayay Madaxtooyada Jubbaland,waxaana dhinaciisa fadhiyay Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil ”Fartaag”.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabada ay ka dhinteen dadkii ku dhintay Jaamacadda,wuxuuna sheegay in Kenya ay tahay dal uso Gurmaday Soomaaliya.
Axmed Mdoobe ayaa sheegay in Jubbaland ay ka go’an tahay inay Kenya ay kala qayb qaadato sugida amniga ee dalkeeda.
Weerarka ka dhacay Jaamacadda Gaarisa ayaa waxaa ku dhintay 147-qof,halka 80-kalena ay ku dhaawacmeen,wuxuuna noqonayaa Weerarkii ugu cuslaa ee Shabaab ay ka fuliyaan Kenya.
Afhayeenka Ururka Shabaab Cali Dheere ayaa sheegay in Weerarka ay fuliyeen Gaarisa uu yimi ka dib markii ay Dawlada Kenya ka dhega adeegtay buu yiri digniino ay u direen Shabaab.
Cali Dheere ayaa sheegay in Weerarka ay ku qaadeen Kenya uu jawaab u yahay Ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya waa siduu hadalka u dhigaye.
Waxaa xusid mudan in Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda amniga gudaha Monica Jama ay sheegtay in dhibaatada Shabaab ee ka dhan ah Kenya ay tahay mid aan Leexleex lahayn.
Weerarka Jaamacadda Gaarisa ayaa noqonaya Weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee Shabaab ay ka fuliyaan Kenya.